Home News Maamulka Magaalada Marka oo war ka soo saaray Dagaal xalay Magaaladaa ka...
Maamulka Magaalada Marka oo war ka soo saaray Dagaal xalay Magaaladaa ka dhacay
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal Culus oo xalay ka dhacay Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo u dhexeeyay Ciidanka guutada 14-ka Octoober iyo Al-shabaab.
Dagaalkan ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kadib markii Al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen Saldhig Ciidanka dowladda ay ku leeyihiin Marka, iyada oo intaas dib uu halkaas ka qarxay dagaal socday muddo ku dhow hal-saac
Maamulka degmada Marka ayaa faah faahin ka bixiyay dagaal culus oo xalay ka dhacay degmadaas, kaddib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen fariisin ay ku sugnaayeen ciidanka xoogga dalka ee Guutada 14 October.
Guddoomiyaha degmada Marka C/llaahi Cali Axmed Waafow ayaa sheegay inay ka war hayeen weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab, lana iska difaacay.
“Meel 8KM u jirta Marka ayay weerar ka soo qaadeen, galabtii ayaa la ogaa, xogtooda waa heynay, dadka deegaanka ayaa farrimahooda na soo gaarsiiyay, waana loo diyaar garoobay, waana la iska caabiyay”ayuu yiri C/llaahi Waafow.
Xaalada magaalada Marka ayaa saaka ah mid degan, waxaana saaka duleedka magaalada ka socda howlgallo ay wadaan ciidanka Guutada 14 October ee gacanta ku haya ammaanka magaaladaas.